Budata UsbFix maka Windows
Free Budata maka Windows (2.92 MB)
UsbFix bụ mmemme bara uru yana nefu nke na -achọpụta ma hichapụ faịlụ na nje niile na -emerụ ahụ na mkpanaka USB gị na draịvụ flash ndị ọzọ. Mmemme a, nke na -enye ịdị mma nke ihichapụ faịlụ dị ize ndụ ruo ama ama gị na igwefoto dijitalụ, dị nfe ma mepụta ya nụzọ na -adịghị agwụ ike kọmputa gị.
Dị ka ị maara, mkpanaka USB bụ ngwaọrụ teknụzụ nwere mmetụta dị nro. Maka nke a, ọ dị mfe imebi faịlụ sistemụ nke gị nihi nje ma ọ bụ ọrịa faịlụ ọjọọ ma ọ bụ iji ya eme ihe. Ị nwere ike iji UsbFix ngwa ngwa gbochie nke a ma hụ na nchekwa nke data gị. Ihe mmemme a, nke nwere ọgbara ọhụrụ, dị mfe yana bara uru, na -enye gị ohere ịchọpụta ma hichapụ nje niile ma ọ bụ faịlụ dị ize ndụ na mkpanaka USB gị.
UsbFix, nke nwere faịlụ niile na -emerụ emerụ na nje na -ebute draịva flash na nchekwa data ya, na -emelite ya oge niile ma na -echebe gị pụọ nihe egwu ọhụrụ.
Ewezuga ịchọta na ihichapụ faịlụ ndị butere ọrịa, mmemme a na -ahụtakwa nsogbu na ndekọ, faịlụ zoro ezo na faịlụ njikwa ọrụ, yana nwekwara ike mezie mmemme ndị a. Ewezuga nke a, enwere m ike ịsị na mmemme nke na -enye ohere ịkwado data dị gị mkpa bara ezigbo uru.
Ọ bụrụ na ị na -eji ebe nchekwa USB mgbe niile maka azụmahịa gị ma ọ bụ mkpa onwe gị, ana m akwado gị ka ibudata UsbFix nefu wee nwalee ya.
Nha faịlụ: 2.92 MB